Harry Maguire oo hal arrin ka codsaday saaxiibadiis cusub ee Man United, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Chelsea – Gool FM
(England) 12 Agoosto 2019. Daafaca dhawaan galka ah ee kooxda Manchester United Harry Maguire ayaa ka codsaday saaxiibadiis inay u rogaan garoonka Old Trafford meel ay adag tahay in kooxaha ay guul ku gaaraan.
Hadalka Harry Maguire ayaa wuxuu imaanayaa kaddib markii ay Manchester United xalay guul raaxo leh kaga daah furatay xili ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League 2019/2020, kaddib markii ay 4-0 ku xasuuqday dhigeeda Chelsea.
Daafaca ugu qaalisan adduunka ee Harry Maguire ayaa xalay ciyaaray kulan weyn, wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah, kaddib markii uu Manchester United ka badbaadiyay kubaddo badan ee halis ah.
Harry Maguire ayaa u sheegay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” dhamaadkii dheesha:
“Waa inaan meeshan ka dhigno mid ay ku adag tahay dhamaan kooxaha naga soo horjeeda ee imaanaya garoonka Old Trafford, si ay u ogaadaan inay adag tahay in halkan gool lagu dhaliyo”.
“Waa bilow fiican ee xilli ciyaareedka ah, laakiin waa inaan sii wadnaa shaqada oo aan horumar samayno”.
“Waxaan la joogay saaxiibadeey 3 ama 4 maalmood, sidaas darteed waa inaan horumar sameeyaa”.
“Waxaan ahayn kuwo xamaasadeysan qeybtii hore sidaas darteed waxaan luminay kubado badan, laakiin waxay heleen fursado dhowr ee goolkeena ah, sababtoo ah haddii aan lumino kubaddo isla markaana ay naga soo horjeedaan 3 ciyaartooy waa xaalad halis ah, maxaa yeelay had iyo jeer waxay heli karaan fursad ay goolal ku dhalin karaan”.
“Laakiin qeybtii labaad ee ciyaarta waxaan ahayn kuwo aad u fiican waxaan xakameynay ciyaarta oo ugu dambeyntii waxaan ku raaxeysanay saddexda dhibcood”.